Fanolorana ao am-piangonana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fahiny dia ny vokatry ny tany, fambolena sy fiompiana, no natao rakitra na tolotra tany am-piangonana. Nisy ny hira fanao mandritra ny filaharana anaterana izany, zary hira fanolorana ny fanatitra. Nentanim-pinoana ireo kristianina taty amin’ny tany misiona, namoron-kira mifandraika amin’izany, araka ny fampianarana ifandovana. Isany ilay kristianina namorona ny hira hoe: “Midina, ry Anjely Masina, hitondra ity hostia madio”, izay ataoko fa hanaparitaka tsy ho ela ny tonony vaovao, mifanaraka akaiky amin’ny takin’ny toetrandro sy ny kolontsain’ny mpino mbola marefo ankehitriny. Mifameno sy mifandraika amin’ny Kanonina romanina sy ilay hira fisaorana manao hoe: “Misaotra anao, Jesoa hostia”, ity hira ity: zary harena miavaka amin’ireo hira fanolorana hafa. Fa inona marina moa ny “hostia”, ary inona no hevitr’izany teny izany?
Ilay mofo natokana hanaovana ny Eokaristia
Rehefa hividy ilay mofo natokana hanaovana ny Sorona Masina na ny Eokaristia isika, dia samy milaza fa handeha hividy “hostia”. Fahiny anefa, tao Roma ohatra, raha nanolotra ireo tolotra ny kristianina, dia nisy ny nanolotra ny mofo sy divay, vokatry ny tany na taozavatra hafa, menaka, akoho amam-borona. Raisin’ny eveka na pretra mpitarika izy ireny, ka raha tsy misy ny fianakaviana na olona mangataka Lamesa, manolotra izany manokana, dia amin’ireo mofo sy divay izay natolotra teo no anavahany azy. Maro ny anarana ilazana izany mofo sy divay voavaka izany ao amin’ny “Vavaka fanolorana (na Oratio Super oblata amin’ny teny latinina)”: tolotra na fanatitra (oblationem, munera), fanomezana, tolotra (dona, offertorium), sorona (sacrificium, hostiam). Saika mampahatsiaro ireo fomba malagasy mifandraika amin’ny fanaon’ireo tsy mpino latinina ny hevitra fonosin’ireo teny ireo: saotra, soro, sorona, joro sy soloho. Koa tsy mahagaga àry raha ilay teny latinina “hostiam” (izay midika hoe: victime), no zary fampiasan’ny kristianina any amin’ireo firenena maro, isany isika Malagasy, ho enti-manondro ny mofo voavaka sy voatsonga hatao sorona.
Mampahatsiahy ny zanak’ondrin’ny Paka tany Ejipta1
Azonao vakina ao amin'ny gazety Lakroa 29 jiona ny tohiny vakio pejy faha-13